Rabshado ka dhacay Hargeysa
7 Dec 7, 2012 - 5:12:08 AM
Magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka la magac baxay Somaliland ayaa tan iyo habeenimadii jimcada rabshado ka dhacay waxay sababeen dhimashada ilaa 3 qof iyo dhawaaca in kabadan 10-ruux .
Iska-horimaad dhexmarey Booliska iyo dadweyne ka careysan natiijada doorashada golaha degaanka ee maamulkaasi ayaa waxa ka dhashey khasaarahan,waxana la sheegey in maanta gebi ahaan bartamaha iyo koonfurta magaaladu ay bandow ahaayeen iyadoona shaqadii ay hakiyeen basaska gaadiidka.
Taageerayaasha ururka Xaqsoor ayaa bilaabay dibadbaxyadan rabshadaha wata ka bilaabay xalay markii lagu dhawaaqey natiijadii horudhaca ahaa ee golayaasha deegaanka Somaliland,waxana ay sheegeen in ay qaadaceen doorashooyinka.
Dadweynaha ayaa taayiro gubayey ,waxana ay wadooyinka safeen dhagaxuun ,iyadoona dhawaqa rasaasta tan iyo xalay ilaa galabta laga maqlayey guud ahaan xaafadaha Hargeysa.
Wixii warar ku soo korsha rabshadaha Hargeysa kala soco warsidahan.